ဗူးညွှန်.ကြော်ချက် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ဗူးညွှန်. .......၂၀ ညွှန်.ခန်.
ထည့်ပေါင်းပြီး..ဗူးညွှန်.တွေကို ထည့် ၊ ဆား ၊ ဟင်းခတ်မှုန်.ဖြည့်ပြီးကြော်ချက်..ချက်တာ..ဗူးညွှန်.ကနုလွန်းတော့အရည်